1. Kedu ihe a ga-atụle mgbe ị na-azụ ihe ntanetị na-agbanwe agbanwe na ntanetị? Kedu otu esi eme nhọrọ ziri ezi? Purchasezụta n'ịntanetị nke ihe nkwụnye ihe ọkụkụ na-agbanwe agbanwe pụtara na a zụrụ ngwaahịa na weebụsaịtị ụlọ ọrụ. Ya mere, enwere ụfọdụ ihe dị mkpa ...
Wei Cheng modul mgbochi ọkụ iji mee nchebe firewall, anyị nwere ike ime nke ọma
Dị ka ụdị ihe nkwụnye ọhụrụ, usoro nchekwa ọkụ na-eji ngwa ngwa weghaara elu nke ihe nkwụnye ihe wee bụrụ ọkacha mmasị ọzọ n'ahịa ihe owuwu. Ihe omumu nke ihe na-ere oku na-eme ka ihe eji eme omenala, agba ...
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, steeti etinyekwuola uche na mgbochi ọkụ nke ọrụ owuwu ihe, na etinyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe mgbochi ọkụ na owuwu injinia. Akpa nchekwa Db-a3-cd01 bụ ụdị ọkụ ọhụrụ na-akwado nkwado ...
Etu esi gbakọọ ngwa ngwa nke mkpuchi ọkụ na-ekpuchi ọkụ
Ihe mkpuchi ọkụ ọkụ na-ejikarị ụdị dị iche iche nke ọkụ na-agbanye ọkụ na plasticizer. Ọ nwere ike na-etolite a edo na kọmpat ogbo ụfụfụ mkpuchi oyi akwa mgbe ọkụ. Ọ nwere ike igbochi ma gbochie mgbasa na mgbasa nke ire ọkụ ma chebe wires ...